Madaxweyne Shariif oo Xilku kaga egyahay October 14, 2009, sida uu dhigayo Axdiga DFKMG
Madaxweyne DFKMG Sheikh Shariif oo Xilku kaga egyahay October 14, 2009, sida uu dhigayo Axdiga DFKMG
Prof Dalxa: “Madaxwaynaha cusub ee la soo doortay waxa uu xilkiisa bilaaban doona marka uu dhamaado xilligii madaxwaynihii hore ee xilka isaga tagay, iyadoo inta ka dhiman xilka madaxwaynihii hore uu booska sii buuxin doono.”
Dastuurka meel ma looga helayaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed in uu xilka madaxweynaha DFKMG sii hayo marka la gaaro October 15, 2009?
Warbixin iyo Faallada SomaliTalk.com | September 30, 2009
“Madaxweynaha wuxuu haynayaa xilka muddo shan (5) sano ah laga bilaabo marka loo dhaariyo madaxweynanimada ayadoo uu marayo dhaarta Axdiga lagu qeexay. Madaxweynahu wuxuu xilka haynayaa haddii aysan jirin – geeri, shaqo ka tegid, ama joojin shaqo sababo lagu qeexay Axdiga – ilaa inta qofka kale ee loo soo doortey madaxweynimada uu xilka la wareegayo.” Sidaas waxaa dhigaya qodobka 43aad, farqadiisa 1aad ee Axdiga DFKMG.
Halkaas waxaa ku cad in haddii uu madaxweynaha DFKMG ee Soomaaliya uu xilka ka dego ayadoo aysan dhammaan muddada shan (5) sano ee xilkiisa, in markaas madaxweyne kale bedelo, haddii uu doono doorasho ha ku yimaadee, ayada oo muddada madaxweynaha cusub ay ku ekaan doonto waqtiga ka dhiman xilliga madaxweynihii xilka ka degey.
Sidaad daraadeed, sharci yaqaanno Soomaaliyeed ayaa rumaysan madaxweynaha hadda ee DFKMG Sheikh Shariif Sheikh Axmed inuu xilku kaga egyahay October 14, 2009. Waqtigaas oo ah marka uu xilku kaga ekaa madaxweynahii DFKMG ee xilka iska casilay, C/laahi Yuusuf Axmed.
In badan oo xeer-beegtida ah, ayagoo cuskanaya dastuurka Federaalka KMG, ayaa rumaysan in si toos ah (rasmi ah) uu xilka uga dhacayo madaxweynaha DFKMG marka uu dhammaado waqtiga ku astaysan xilligii madaxweynahii xilka ka tegey ee ka horeeyey. Haddii uu ka degi waayono in baarlamaanku mooshin ay xilka kaga qaadayaan soo jeediyaan. Markaasna musharaxiin cusub loo furo jagadaas. Madaxweynaha xilka markaas haya waa in muddada qarraran oo aan la gaarin ka hor uu baarlamaanka u caddeeyo in uu ku jiro musharaxiinta kale ee xilkaas isu sharaxaya, ayey rumaysan yihiin xeer-beegtu.
October 10, 2004 ayey ahayd markii magaalada Nairobi ay xildhibaanada DFKMG ah madaxweyne u doorteen Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxaana xilkaas loo dhaariyey October 14, 2004. Waxana uu xilkaas iska casilay December 29, 2008 ayadoo aysan dhammaan waqtigii xilka loo doortay oo ku ekayd October 14, 2009, haddii uusan is casili lahayn. Bartaas weeye meesha xeer-beegta Soomaaliyeed ay ka duulayaan marka ay leeyihiin xilka Sheikh Shariif waxa uu QANUUN ahaan ku egyahay muddadii uu xilku kaga ekaa C/laahi Yuusuf oo ah bisha October 14, 2009.
Janaayo 30, 2009 ayaa magaalada Jabuuti waxay baarlamaankii tiradiisa la kordhiyey madaxweynaha DFKMG u doorteen Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Xeer-beegtidu waxay dastuurka FKMG ka waayeen qiil muujinaya in uu xilkiisu dhaafayo waqtigii xilku ugu ekaa madaxweynahii FKMG ee is casilay. Dastuurkaas u deggan DFKMG oo ay tahay in lagu dhaqmo, si uu u jiro xeer kala haga qaybaha kala duwan ee xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.
Xeer-beegtidu waxay sheegeen in muddada labada sano ah ee la xusay in cida loo kordhiyey ay tahay Baarlamaanka DFKMG , si uu u sii jiro niddaam dawladeed oo xiriirsan muddada kala guurka ee madaxweynaha cusub la dooranayo, ee arrintu ma ahayn in muddadii shanta (5) sano ahayd loo kordhiyey madaxweynaha, ayey rumaysan yihiin xeer-beegtu.
Madaxwayne Shariif waxaa xilka Madaxwaynanimada loo dhaariyey Jan 31, 2009. Sharci yaqaanada ayaa qaba in Madaxwaynaha aan waxba loo kordhin, xilkiisuna uusan gaarsiisnayn Jan 31, 2011.
Waxaa jirtey dood ka dhex dhacday xildhibaano ka tirsan DFKMG oo ku saabsanayn in bishii la soo dhaafay ee August 22, 2009 uu xilka ugu ekaan lahaa guddoomiyaha baarlamaanka DFKMG (waa waqtigii uu xilka ugu ekaan lahaa Shariif Xasan). Doodaas ka dib waxaa xeer-beegtu sheegeen in guddoomiyuhu uu ka mid yahay xildhibaanada muddada isu-kordhiyey.
Waxaa xusid mudan August 22, 2004 in Shariif Xasan Sheikh Aaden loo caleema saaray Guddoomiyaha Baarlaanka DFKMG, kulan ka dhacay Nairobi. Muddo ka dib markii DFKMG kala qaybsantay ayaa January 17, 2007 waxay Baarlamaankii Baydhabo ee DFKMG ay kalsoonidii guddoomiyaha kala laabteen Shariif Xasan. January 31, 2007 ayaa Guddoomiyiha Baarlamaanka DFKMG waxaa loo doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sh. Aaden Madoobe). Gudoomiyaha Sh. Aadan Markii loo dhaariyey Jagadii Shariif Xasan laga qaaday lama xusin in loo dhaariyey Shan-sano oo hor leh, ee waxaa Baarlamaanka iyo Dowladuba rumays naayeen sida Axdiga u qoran uu dhigayo inuu dhamaystirayo mudaddii 5 sano ahayd ee Barlamaanka cimrigiisu ku ekaa intaysan isugu kordhin Jabuuti.
January 28, 2009 ayey ahayd markii Guriga Ummada ee Caasimada dalka Jabuuti lagu dhaariyey xildhibaano lagu soo kordhiyey baarlamaanka DFKMG. Xildhibaanadii cusbaa ee la dhaariyey maalintaas tiradoodu waxay ahayd 140. Kalfadhigii ugu horeeyey ay baarlamaankii la kordhiyey isla maalintaas (28/1/2009) ku yeesheen Jabuuti, oo uu gudoominayay sii-hayahii xilka Madaxweynaha DFKMG, ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka Sh. Aaden Madoobe, ayaa waxaa cod loo qaadey in wax laga bedelo qodob Dastuuri ah oo Axdiga KMG ah, qodob kaas oo ahaa muddada jiritaanka Baarlamaanka TNG in lagu daro 2 sano iyo 7 bilood ee markaas u dhinayd, taas oo cod aqlabiyad ah lagu ansixiyey (211 ogolaatay kordhinta xilliga baarlamaanka DFKMG iyo 6 diidey). Sidaas ayaa jiritaankii baarlamaanka lagu kordhiyey. Laakiin meelna xeerkaas lagagama xusin in madaxweynaha loo kordhiyey xilkiisa.
Arimahaas ayadoo la xusayo ayaa xeer-beegtidu waxay rumaysan yihiin in aan loo baahnayn in Sheikh Shariif laga geeyo mooshin, balse hab qaanuuni ah uu xilkiisii kaga egyahay October 14, 2009.
August 19, 2009 ayey ahayd markii baarlamaanka DFKMG la geeyey mooshin ku saabsan in dalka lagu soo rogo xukun degdeg ah (marshal law). Hadda waxaa la rumaysan yahay in mooshinkaas xaalada dag daga ah lagu soo rogay loogu talo galay in xildhibaanada DFKMG la kala diro, si loo dhaafiyo waqtigii ay xildhibaanadu ku dooran lahaayeen Madaxweyne cusub, ama ay mooshin ku keeni lahaayeen. Waxaa taas sii dheer waxaa xildhibaanada la siiyey bil-iyo-bar fasax oo loo siiyey ciidul-fitriga awgeed.
Baarlamaanka DFKMG waxa uu u muuqdaa mid go’aamadiisa aysan fulinayn xukuumaddu, sida go’aankii uu baarlamaanku August 1, 2009 si aqlabiyad buuxda waxba kama jiraan kaga dhigay heshiiskii Dowladda Kumeel gaarka ah ay laga gashay Dowlada Kenya looguna yeero (Is-faham). Xeerkaas oo loo gudbiyey madaxweynaha DFKMG oo ay ahayd in uu u gudbiyo Qarammada Midoobay (QM). Taas bedelkeedii waxaa QM loo diray warqad ku taariikhaysan August 19, 2009 oo loo saxiixay Ra’iisul wasaaraha DFKMG Cumar C/rashiid, ilaa iyo hadana majiraan wax jawaaba oo kasoo baxay Xafiiska Raysul wasaaraha.
Ibraahim Daa’uud Cabdalla oo ka tirsan bahda SomaliTalk.com ayaa September 28, 2009 waxa uu Nairobi waraysi kooban kula yeeshay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka DFKG, Prof. Maxamed Cumar Dalxa. Waxana uu weydiiyey “Haddii uu dhamaaday mudadii shanta sano ahayd ee baarlamaanka sidee sharci ku tahay in Madaxwaynaha iyo Baarlamaanka ay ku sii shaqeeyaan…
Prof. Dalxa jawaabtiisii waxa ka mid ahaa:
“Waxa jira xeer dastuurka noogu qoran oo sheegaya in mudo 5 sano ah uu yahay xiliga Baarlamaanka iyo Madaxwaynaha ay xilka sii heen karaan marka iyadoo ay sidaasi jirto ayaa haddana awooda ugu sareeysa waxaa iska leh Baarlamaanka iyadoo waxna uu ka badali karo waxna uu ku dari karo.”
“Shirkii dalka Jabuuti ka dhacay oo ay soo abaabuleen Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Dowladaha iyo ururada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay in tirada baarlamaanka Soomaalia la kordhiyo iyadoo isbadalkaasi uu keenay in baarlamaankii horana waqtigaasa la kordhiyo laguna daro mudo 2 sano ah.”
“Markii uu madaxwaynihii hore ee uu xilkiisa oo ay ka dhimantahay bilooyin uu shaqada isaga tagay ayaa loo baahday in madaxwayne cusub uu dalka yeesho taasi ayaana keentay isbadalka dhacay.”
“Madaxwaynaha cusub ee la soo doortay waxa uu xilkiisa bilaaban doona marka uu dhamaado xilligii madaxwaynihii hore ee xilka isaga tagay, iyadoo inta ka dhimana xilka madaxwaynihii hore uu booska sii buuxin doono.”
“Xilka kordhinta Baarlamanka iyo tan madaxwaynaha waa isku mid oo madaxwaynaha iyo Baarlamaanka intuba waxa loogu daray mudo 2 sano ah. Dadka oranaya baarlamaanka xiligiisa wuu dhamaaday sharcina maahan in uu sii shaqeeyo waa dad aanan waxba la socon.” Ayuu yiri Prof.. Dalxa. (Su’aal kale oo ku saabsan heshiiska badda ee loogu yeero Is-faham oo aan weydiinay Dalxa qoraaladeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah.)
Balse haddii aan ku istaagno erayada guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka, waxa uu qiray in muddadii baarlamaanka iyo tan madaxweynuhu ay ahaayeen shan (5) sano. Waxa kale oo uu qiray in muddada baarlamaanka lagu daray laba (2) sano. Laakiin ma uusan xusin xeer baarlamaan iyo Axdi qarameed muujinaya in la kordhiyey muddada madaxweynaha. Waxa uu caddeeyey in madaxweynaha DFKMG ee hadda uu sii buuxin doono booska inta ka dhiman xilka madaxweynahii hore.
Prof Dalxaa waxa uu sheegay “Madaxwaynaha cusub ee la soo doortay waxa uu xilkiisa bilaaban doona marka uu dhamaado xilligii madaxwaynihii hore ee xilka isaga tagay”, laakiin ma uusan caddayn in doorasho cusub lagu celin doono maadaama Axdiga FKMG aysan ku caddayn in la kordhiyey waqtigii madaxweynaha DFKMG ee ahaa shanta sano. Tan kale, marka haddii la yiraahdo Madaxweynuhu waxa uu “xilkiisa bilaaban doona marka uu dhamaado xilligii madaxwaynihii hore”, ayadoo la ogyahay in xilligii madaxweynihii hore uu dhammaan lahaa October 14, 2009. Taas macnaheedu miyeysan ahayn in madaxweynaha uu xilkiisa hayn doono shan sano oo kale oo ah 2009- 2014, sidaas daraadeedna loo baahan yahay doorasho cusub oo la qabto October 15, 2009.
Haddii aan ku labano qodobada Axdiga FKMG, Qodobka 32aad waxa uu gaar u khuseeyaa muddada Baarlamaanka, halka Qodobka 43aad uu khuseeyo muddada Madaxweynaha.
Dhammaan xeer-beegtu waxay isku raacsan yihiin wixii hoos yimaada Qodobka 32aad iyo faracyadiisa in looga hadlayo Muddada Golaha Baarlamaanka. Halka wixii hoos yimaada Qodobka 43aad iyo faracyadiisuna ay khuseeyaan muddada Xilka Madaxweynaha.
Waa kuwan labadaas qodob sida ay ugu qoran yihiin Axdiga FKMG.
Axdigii DFKMG loogu sameeyey Nairobi 2003/2004
Qodobka Ku Saabsan Muddada Baarlamaanka FKMG
Muddada Golaha Shacabka Federaalka ee kumeel Gaarka
1. Muddada Dowladda Federalka ee Ku Meel Gaarka ah waa shan (5) sano.
2. Muddada Golaha Shacabka Federaalka waxay ka bilaabanaysaa tariikhda loo dhaariyo xilka, waxayna socon doontaa ilaa iyo taariikhda la ansaxiyo doorashada xigta ee Golaha Shacabka.
3. Kulanka koowaad ee Golaha Shacabku wuxuu ku qabsoomayaa 30 berri gudahood laga bilaabo marka seddex-meelood labo xubnaha Golaha xilka loo dhaariyo.
4. Muddada Golaha Shacabka Federalka ee Ku Meel Gaarka ah lama kordhin karo.
5. Fadhiga ugu horeeya ee Golaha Shacabka waxaa shir-gudoominaya xubinta ugu da’da wayn ilaa guddoomiyaha Golaha Shacabka laga doorto.
The Term of the Transitional Federal Parliament
1. The term of the Transitional Federal Parliament shall be Five (5) years.
2. The tenure of parliament shall commence from the date of taking the oath of office and shall continue until the date of commencement of the next parliament.
3. Parliament shall meet in its first session within 30 days from the date two-thirds of the members of the Parliament shall have taken the oath of office.
4. The term of the Transitional Federal Parliament shall not be extended.
5. The first meeting of the Parliament shall be chaired by the most senior member in age until a Speaker is elected.
Axdiga Cusub ee Janaayo 2009 Djouti laga soo saaray
Qodobka Muddo-Kordhinta Baarlamaanka FKMG:
Muddada Golaha Shacabka Federaalka ee ku meel gaarka ahi
Muddada dowladda federaalka ee ku meel gaarka ah waa (7)sano waxaa lagu kordhiyay (2)sano.
Muddada golaha shacabka federaalka waxay ka bilaabanaysaa taariikhda loo dhaariyo xilka,waxayna socon doontaa ilaa iyo taariikhda la ansixiyo doorashada xigta ee golaha shacabka.
Kulanka koowaad ee golaha shacabku wuxuu qabsoomayaa 30 beri gudahood laga bilaabo marka saddax-meelood labo xubnaha golaha xilka loo dhaariyo.
Faqradan 4aad waa laga saaray.
Fadhiga ugu horreeya ee golaha shacabka waxaa shir-guddoominaya xubinta ugu dada weyn ilaa guddoomiyaha golaha laga doorto.
Axdiga KMG ah ee 2003/ 2004
Qodobka ku saabsan Muddada Madaxweynaha DFKMG
Muddada Xilka Madaxweynaha
1. Madaxweynaha wuxuu haynayaa xilka muddo shan (5) sano ah laga bilaabo marka loo dhaariyo madaxweynanimada ayadoo uu marayo dhaarta Axdiga lagu qeexay. Madaxweynahu wuxuu xilka haynayaa haddii aysan jirin – geeri, shaqo ka tegid, ama joojin shaqo sababo lagu qeexay Axdiga – ilaa inta qofka kale ee loo soo doortey madaxweynimada uu xilka la wareegayo.
Tenure of the Prisident in the Office.
(a) The President shall hold office for a term of four (4) years beginning from the date on which he/she is sworn in as President in accordance with the Oath of Office provided for in this Charter. 22 The President shall, unless his/her office becomes vacant by reason of his/her death, resignation or ceasing to hold office by virtue of the provisions of this Charter, continue to hold office until the person elected as President at a subsequent election assumes office.
Qodobka khuseeya muddo-kordhinta madaxweynaha (2009):
Qodobkan waxba lagama bedelin sidii uu ahaa Axdigii 2003/2004.
Halkaas waxaa ku cad in qodobka 32aad ee khuseeya Golaha Shacabka (Baarlamaanka) in muddadii shanta (5) sano ahayn laga dhigay toddoba (7) sano. Laakiin in waqtigii shanta (5) sano ahaa ee madaxweynaha uu sidiisii yahay.
Waxaa la is weydiin karaa, xildhibaanada FKMG goorma ayey u istaagayaan dhawrista Axdiga u deggan, marka la gaaro October 15, 2009 ma adeegsan doonaan Qaanuunka, mase dhammaantood in aan Axdiga la dhaqan geliyey ayay isla qabaan maadaama ilaa hadda aan la hayn cid ka hadashay arrintaan, mise warba la isuma hayo maadaama tiradu badan tahay, mise waxaa jira niyad jab aan meelna wax laga qaban karin?.
(Tixraac Dastuurka DFKMG ee 2003).
Isha Sawirada: Google images
Warbixintii iyo Faalladii SomaliTalk.com / September 30, 2009